Umthetho Wezinkampani | Law & More BV
Umthetho Wezamabhizinisi / Umthetho Wobumbano
Ngabe ufuna ukusungula ibhizinisi? Noma usuvele usomabhizinisi? Uma kunjalo, ngokungangabazeki kufanele ubhekane nomthetho webhizinisi. Njengamanje ngesikhathi sokusungulwa kwebhizinisi kuzodingeka ubhekane nombuzo wokuthi imuphi uhlobo lwenkampani olufanele kakhulu. Futhi, zonke izinhlobo zezivumelwano kufanele zibhalwe phansi. Ngokuhamba kweminyaka okuningi kungashintsha ngaphakathi kwenkampani nakho. Ifomu lenkampani kungenzeka lingasafaneleki. Izingxabano zingavela phakathi kwabaninimasheya noma phakathi kwabahlanganyeli.
Ngabe ufuna ukusungula ibhizinisi? Noma usuvele usomabhizinisi? Uma kunjalo, ngokungangabazeki kufanele ubhekane nomthetho webhizinisi. Njengamanje ngesikhathi sokusungulwa kwebhizinisi kuzodingeka ubhekane nombuzo wokuthi imuphi uhlobo lwenkampani olufanele kakhulu. Futhi, zonke izinhlobo zezivumelwano kufanele zibhalwe phansi. Ngokuhamba kweminyaka okuningi kungashintsha ngaphakathi kwenkampani nakho. Ifomu lenkampani kungenzeka lingasafaneleki. Izingxabano zingavela phakathi kwabaninimasheya noma phakathi kwabahlanganyeli. Noma mhlawumbe ibhizinisi lakho alinazo izimpahla ezanele ze-liquid. Law & More uchwepheshe endaweni yomthetho wamabhizinisi waseDashi. Kusukela ngomzuzu wokusungulwa kuze kube umzuzu wokuvalwa kwenkampani, singakunikeza ngezeluleko ezingokomthetho nezezimali.
> Umthetho wezomthetho wabantu
> Ukubusa Kwezinkampani
> Ukuhlanganisa nokuthengwa
Umthetho wezomthetho wabantu
Thina at Law & More ingakusiza ekukhetheni ifomu lenkampani elifanele. Ukuhlukanisa kungenziwa phakathi kwamafomu anobuntu obungokomthetho namafomu ngaphandle kobuntu obungokomthetho. Uma ibhizinisi linobuntu obungokomthetho, lingabamba iqhaza ekuthengisweni okusemthethweni njengabantu bemvelo. Uma kunjalo inkampani yakho ikwazi ukwenza izivumelwano, inempahla nezikweletu futhi ingabekwa icala.
Uma ufuna ukwenza ibhizinisi, udinga ukukhetha ifomu lenkampani. Yiliphi ifomu elingokomthetho elifanelekile lincike ezicini ezahlukahlukene, njengezidingo zokufakwa, ubuntu obusemthethweni, isikweletu esihlanganyelwe nesibekiwe futhi okungenzeka ukudluliselwa kwamasheya. Futhi kuthiwani uma omunye wabalingani bokubambisana okujwayelekile (i-VOF) efuna ukushiya inkampani? Futhi kuthiwani ngeFlex-BV? Lezi zifundo zilawulwa ngumthetho wenkampani. Izinto eziningi zingahlelelwa ngokwezifiso kusengaphambili. Kungakho-ke kungakuhle ukuthi ubandakanye nezinsizakalo zommeli webhizinisi ngaphambi kokusetha inkampani.
Ngabe wena njengenkampani uhlose ukusebenzisana nezinye izinkampani ngenhloso yokugcina isimo sakho semakethe? Noma, kunalokho, ngecebo lokungena emakethe entsha? Uma ufuna ukwakha umfelandawonye onamasu singakweluleka ngobungozi nezinzuzo. Ngaphezu kwalokho, ngokubambisana, singathola ukuthi yiziphi izindlela zokubambisana ezifanele.
Ngabe uhlose ukuhlanganisa inkampani yakho nenye, ngoba ufuna ukukhuthaza ukukhula ngokwesibonelo? Bese kunezinhlobo ezintathu zokuhlanganiswa: ukuhlanganiswa kwenkampani, ukuhlanganiswa kwesitoko nokuhlanganiswa okusemthethweni. Okufanele kakhulu inkampani yakho kuya ngesimo esithile. Law & More abameli bangakweluleka ngale ndaba.
Kwesinye isikhathi enye inkampani ingaba nentshisekelo yakho. Kungakunikeza ukuthi uthengise ibhizinisi lakho kuye. Uma uhlose ukwamukela lesi sicelo, khona-ke singakunika izeluleko kusengaphambili. Singaxoxa futhi ngawe.
Uma inkampani ingafuni ukuthi amasheya abo athengiswe futhi odlulayo asondele kwabaninimasheya, sikhuluma ngokuthathwa kwenkani. Siyazi ukuthi ungayivikela kanjani inkampani yakho ezimweni ezinjengalesi futhi ingakusiza ngezeluleko zomthetho.
Ngaphandle kwalokho, kubalulekile ukuthi wenze inkuthalo efanele, ikakhulukazi uma wena njengenkampani uthenga enye inkampani. Ufuna lonke ulwazi oludingekayo ukwenza ukukhetha okucatshangelwe ngokuhlanganiswa noma ukutholwa.
Abameli benkampani ye Law & More izokunikeza ukubonisana okusemthethweni okubonakalayo ngenkampani yakho. Sihumusha umthetho ube ngamagama asebenzayo, ukuze nizuze ngempela eselulekweni sethu. Kafushane, Law & More angakunikeza usizo lwezomthetho kulezi zinto ezilandelayo:
• Ukusungulwa kwenkampani
• Ukubambisana phakathi kwezinkampani
• Ukuhlanganiswa nokuthengwa
• ukuxoxisana nokudideka uma kuziwa ezingxabanweni phakathi kwabaninimasheya kanye / noma nabalingani
• Abaqondisi isikweletu
Bese usithinta ngocingo +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar: